လှကျော်ဇော – စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့သားကောင်များ | MoeMaKa Burmese News & Media
Join 88,285 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month August 2018 (134) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
K ငြိမ်းချမ်း (88)
Cartoon Box (3,570)
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၇
“….. ခင်ဗျားတို့တွေထဲက သူ့စိတ်ကြိုက် ပြည်သူတွေ ပိုသတ်နိုင်မယ်ထင် တဲ့လူတချို့ကို ရာထူးကြီးတွေနှင့် လာဘ်ထိုးခဲ့တယ်။ ဒီလိုနှင့် တပ်ကြပ်ကြီး ကနေ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေအထိ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးပေးဖို့ဝန်မလေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်သတ်ဖို့ နောက်လူကိုတင်ပေးဖို့ ရှေ့လူကိုကန်ထုတ်ဖို့ လည်း ဝန်မလေးဘူး။ သူ့စိတ်ကြိုက် ပြည်သူတွေကိုသတ်ဖို့ လက်ရွံ့တဲ့မျိုး ချစ်တွေ အစဉ်အလာရှိခဲ့တဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ တပ်မှူးတပ်သားတွေကို တော့ တဦးပြီးတဦး ကန်ထုတ်တယ်မဟုတ်လား။
ဒါတွေကြောင့် ရာထူးကြီးတဲ့လူတွေလည်း စိတ်တထင့်ထင့်နေရတဲ့ဘဝ မဟုတ်လား”
……. (၁၁-၈-၁၉၇၆။ တိုင်းပြည်သို့ တင်ပြချက်။)
(ဆိုင်းစုမှသည် မန်ဟိုင်းဆီသို့။ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပွတ္တိပေါင်းချုပ်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော၊ ယဉ်မျိုး စာပေ၊ နှာ–၃၂၂)
“….ထိုအချိန်ကာလ(၁၉၅၆) ခုနှစ်သည် ဆိုရှယ်လစ်များက တပ်တွင်းတပ်ပြင် သြဇာလွှမ်းမိုးရေး အကြီး အကျယ်ကြိုးစားနေမှု အရှိန်ရနေချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ သူတို့သည် ပြင်ပအန္တရာယ်ဖြစ်သည့် တရုတ်ဖြူ တိုက်ရေးထက် ပြည်တွင်းစစ်ကိုသာ အလေးပေး အပြုတ်တိုက်ချင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ပြည်သူလူထုနိုးကြားပြီး တောင်းဆိုလွန်း၍သာ (တဖက်ကလည်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဖော်ထုတ် ဖွင့်ချနေ၍သာ) တရုတ်ဖြူတိုက်ရေးကိုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုတိုက်ပွဲများအရှိန်နှင့် ကျွန်တော်သြဇာကြီး လာမှုကိုလည်း သူတို့စိုးရိမ်နေကြသည်။….
“….. တပ်တွင်းမှာ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဆန့်ကျင်သည့် တပ်မှူးများလည်းရှိရာ ကျွန်တော်နှင့်ပူးပေါင်း စည်းရုံး မိပြီး သူတို့ဆိုရှယ်လစ်များကို အာခံခေါင်းမာလာကြမှာလည်း စိုးရိမ်ကြသည်။ အဓိကမှာ ဆိုရှယ်လစ်များ အနေနှင့်တိုင်းပြည်ကို ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် ခြယ်လှယ်လိုကြရာတွင် တပ်မတော်ကို ပထမဆုံးသူတို့စိတ်ကြိုက် အုပ်စီးနိုင်ဖို့ရာ မှာ ဆူးငြောင့် ခလုတ်ဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်ကို ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုပေသည်” ……(အထက်ပါစာအုပ်-နှာ၂၄၄)
အထက်ပါစာစုများဟာ ဖေဖေရေးသားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာများထဲက တပ်မတော်တွင်း အခြေအနေများ ကို တစိတ်တပိုင်းဖော်ပြနေတဲ့ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေ ပြည်ပကနေ ဒီစာစုတွေရေးသား စဉ်က ပြည်တွင်းမှာဖိနှိပ်မှုအလွန်ပြင်းထန်နေချိန်ဖြစ်လေတော့ တချို့သူများထိခိုက်မှာ စိုးရတာကြောင့် တချို့ကိစ္စတွေမှာ နံမည်ဖော်မရေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ ကာယကံရှင်များ ကွယ်လွန်ကုန်ပြီဖြစ် လို့ ဖေဖေ မပြည့်မစုံ(သို့မဟုတ်) ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းလောက်သာ ရေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို (ယခု နောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချက်အလက်များ ပါပေါင်းစပ်ပြီး) ကျွန်မဖြည့်စွက် ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖေကိုယ်တိုင်လည်း အဲသလို ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းလောက် ရေးရတာကို ဘဝင်ကျဟန်မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ဖေဖေက .. တချို့အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျွန်မတို့သားသမီးများအပါအ၀င် သူ့အနီးအနားမှာ အလုပ်လုပ်ဖူး သူ ရဲဘော်တချို့ကို အပြည့်အစုံပြောပြောပြတတ်ပါတယ်။
….ဒီလိုပြောဆိုရေးသားတဲ့အခါတိုင်း ဖေဖေရင်ထဲ ပေါ်ပေါ်လာတတ်တဲ့-ဖေဖေရောင်းရင်း ရဲဘော်ကြီးများ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ..တပ်တွင်းမှာ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဆန့်ကျင်သူများလည်းရှိရာ..ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာ ဖေဖေဆိုလိုချင်သူများဟာ ဖေဖေနဲ့ဗမာ့တပ်မတော် အမြုတေဘဝကစလို့ တောက်လျှောက်အတူတွဲ တိုက် ခဲ့ခိုက်ခဲ့တဲ့ တပ်မှူးကြီး ဟောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်(နောက်ပိုင်း NLD-ဦးကြည်မောင်)၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင် (စာရေးဆရာ မြတ်ထန်) စသူတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။( သူတို့နှစ်ဦးစလုံး တပ်မတော်မှ ဖြုတ်-ထုတ်ခံရပြီး မဆလခေတ်မှာ ထောင်တန်းလည်း ကျခံခဲ့ရပါတယ်။)
ဒီနေရာမှာ အခုခေတ်လူငယ်များအတွက် မျက်စိလည်စရာဖြစ်တဲ့ ..”ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ” ဆိုတဲ့အသုံးကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဗမာ့တပ်မတော်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ”ရဲဘော်သုံးကျိပ်” အဖွဲ့မှာ စကတည်းက-တို့ မာ အဖွဲ့အစည်းက အုပ်စု(၂)ဖွဲ့ (သခင်ကိုယ်တော်မှိူင်းအုပ်စုနဲ့ -သခင်ဗစိန်-သခင်ထွန်းအုပ်-အုပ်စု) နဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဂိုဏ်းဂနစိတ်ကင်းစင်တဲ့သခင်အောင်ဆန်း (ထိုအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်အမည်မတွင်သေး။ သာမန်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးသာဖြစ်သေး)ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ တညီတညွတ်တည်း တစိတ် တဝမ်းတည်း “ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်” ဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့ စည်းလုံးညီ ညွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ၁၉၄၂ ခုနောက်ပိုင်း-ဗမာ့တပ်မတော်ကို ခေတ်မီတပ်မတော်အဖြစ် ထူထောင် ရေးအတွက် ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်(ဘီ-ဒီ-အေ) ကိုတည်ထောင်ရာမှာ ပညာတတ်အများအပြား ဝင်လာဖို့ စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ နောင်ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ (ဆိုရှယ်လစ်ပါတီလို့လည်း ခေါ်ပါ တယ်။) ကို ဦးစီး ကြမယ့်သူများ (ဥပမာ-ဗိုလ်အောင်ကြီး ၊ ဗိုလ်မောင်မောင်) ပါလာကြပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးသွားပြီးနောက် အာဏာရလာတဲ့ ဖဆပလ လက်ယာဂိုဏ်းနဲ့ အဲဒီအုပ်စုကပေါင်းမိသွားပါ တယ်။ အဲဒ်ီသူတွေကို တပ်တွင်းဆိုရှယ်လစ်များလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့သူများအကြောင်းကို ကျွန်မ ဆို ရှယ်လစ်တပ်မှူးများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါး ရေးဖူးပြီးပါပြီ။
(ကျွန်မဆက်၍ ရေးချင်သော ဖေဖေ့အကြောင်းများ။ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်အတွဲ(၁)။ ဖြိုးမောက်သာ စာပေ။ နှာ-၁၁၉-၁၄၄)။
ဒီလိုနဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်တွင်း ဂိုဏ်းအုပ်စုတွေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ၁၉၄၈-ပြည်တွင်းစစ်စတင်တော့-ဗမာ့ တပ်မတော်တွင်းရှိ ကွန်မြူနစ်များ တောခိုကုန်ကြပါတယ်။ ဒီတင်-ဆိုရှယ်လစ်များ တန်ခိုးထွားလာပြီး-တပ်မတော် တွင်း ထိပ်တန်းနေရာ တော်တော်များများ (အထူးသဖြင့်-စစ်ရုံးချုပ် War-Office မှာ) ကို သူတို့ အုပ်စီးမိသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ၊ သူတို့ပါတီထဲ မဝင်သူများကို ဖဲကြဉ်လာကြပါတယ်။
တကိုယ်ရည်ကောင်းစားကြီးပွားချင်သူ များကလည်း သူတို့ပတ်လည် ၀ိုင်းနေခဲ့လေတော့ အလွယ် တကူ အစားထိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်ထဲမှာ နောက်အုပ်စုတစု ရှိပါသေးတယ်။ ကွန်မြူနစ်ကိုလည်းမကြိုက်-ဆိုရှယ်လစ်နောက်လည်း မလိုက်၊ အခြေခံမျိုးချစ်ပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ အနေမှန်မှန်နေ-နေကြသူများပါ။ တိုက်ရေးခိုက်ရေးမှာလည်း နံမည် ရထားသူများလည်းဖြစ်တော့ စစ်ရေးအမြင်သန်ကြပြီး ဘာစစ်မှထိထိရောက်ရောက်မတိုက်ခဲ့ကြဘဲ နိုင်ငံ ရေးအရ နေရာတွေဝင်ယူလာကြသူများကိုလည်း သိပ်ကြည့်ရသူများမဟုတ်ရုံမက၊ အဲဒီလူတွေကို ဘယ် တော့မှ လည်း ခခယယလုပ်သူများမဟုတ်ကြပါဘူး။
ဒီ့အပြင် သူတို့ဆိုရှယ်လစ်အုပ်စုအနေနဲ့ အဲဒီတပ်မှူးကြီးများကို ကြည့်မရတဲ့အချက်တရပ်ကလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒါကတော့ ဗမာပြည်ကြီးလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကာလ ၁၉၄၇ ခုနှစ်ကစပြီး(ရခိုင်မူဂျာဟစ်အရေးအခင်း) ကအစ
နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်အကျပ်အတည်းများ (၁၉၄၉-၅၀-ကေအင်ဒီအိုအရေးအခင်း.. အင်း စိန်တိုက်ပွဲ)အလယ်၊ တိုင်းတပါးကျူးကျော်မှုအဆုံး (၁၉၅၄-၅၅-တရုတ်ဖြူကျူးကျော်မှု)စတဲ့ တိုက်ပွဲကြီး များမှာ… ဖေဖေနဲ့ ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး ဖေဖေအပေါ်မှာလည်း အလွန်လေးစား ခင်မင်ခဲ့ကြသူ များ ဖြစ်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
[မှတ်ချက်။ ။ ဗိုလ်မှူးကြီးချစ်မြိုင်ရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံ ပြန်ပြောင်းပြောဆိုချက်များ။(Burma Debate)။
ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လွင် (NLDဦးလွင်ရဲ့)- မျိုးချစ်စစ်သည်မှ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်ဘ၀သို့(RFA ထုတ်လွှင့် ချက်။)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း တင်ဦး(NLD ဦးတင်ဦး) ရဲ့ VOA-တပ်မှူးတပ်သားပြောစကားကဏ္ဍ။
ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း တင်မောင်(မြတ်ထန်)ရဲ့ တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန် စာအုပ် ..စတာများကို ကြည့်ပါ။]
အဲဒီကာလက ဖေဖေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် အတူတွဲ တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ တပ်မှူးများ ရဲ့ဖေဖေ့အပေါ်ထားရှိတဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုကျွန်မနောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်မိတဲ့အခါ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းတရပ် ဖေဖေ့ အပေါ်လေးစားသမှု ပြုသူများအပေါ် ဘယ်လိုဂိုဏ်းဂဏစိတ်ထားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်သွားပါ တယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတင်မောင်ရဲ့…ဘ၀မုန်တိုင်းထန်လေပြီ( ဘဝသမင်လည်ပြန်)-(စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ) စာအုပ်ပါ။
“…စာရေးသူမကွယ်လွန်မီ ရေးသားပြီးစီးခဲ့ပြီး ချယ်ရီမဂွဇင်းတွင် လဆက်ဖော်ပြခဲ့ရာမှ ရပ်ဆိုင်းသွားပြီး နောက် လုံးချင်းအဖြစ်လည်း ထုတ်ဝေခွင့်မရခဲ့ဘဲ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း (Newly News)ဂျာနယ်တွင်မှ အခန်းဆက်ပြန် လည်ဖော်ပြခဲ့သည့်စာမူကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် တပေါင်းတည်း ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်” … တဲ့။
ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတင်မောင်၏ ကိုယ်တိုင်ရေး ဘဝတစိတ်တဒေသ ဖြစ်ရပ်မှန်မှတ်တမ်းရှည်ကြီးလို့ ဆို ထားပြီး…တကြိမ်တခါမှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုရသေးသော ဘ၀ထုပ္ပတ်စာတအုပ်လို့လည်း ဆိုထားပါ တယ်။
ဗိုလ်မှုးကြီးဟောင်းတင်မောင်ဟာ (ဂျပန်ခေတ်)မင်္ဂလာဒုံစစ်တက္ကသိုလ်ပထမပတ်ဆင်းဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်ဘုရင့် စစ်တက္ကသိုလ်ဆင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၁- ခုနှစ်တပ်မတော်မှပင်စင်ယူပြီးချိန်မှစပြီး စာပေအမျိုးမျိုး ရေးသားလာတာပါ။
တပ်တွင်းအတွေ့အကြုံများကို “ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတင်မောင်” ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်နဲ့ရေးခဲ့ပြီး၊ ရသ ဝတ္တု စာပေများကိုတော့ “မြတ်ထန်”ဆိုတဲ့ကလောင်အမည်နဲ့ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ စာပေဗိမာန်ဆုတောင် ရဖူးပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်မှာတော့ သူအရင်ကရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်များထဲက အချို့အစိတ်အပိုင်း တွေ ပြန်ပါတာတွေရှိပေမယ့် အစိတ်အပိုင်းအတော်များများကတော့ ပထမဆုံး ထုတ်ဖော်ရေးသားထား ဟန် ရှိပါတယ်။ ဗမာ့တပ်မတော် ရဲ့အတွင်းရေးတွေ အတော်ပါပါတယ်။ ဒါတွေ မခြွင်းမချန်ရေးသွားတဲ့ အတွက် စာရေးမှတ်တမ်းတင်သွားသူ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတင်မောင်ကို ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။
မျိုးချစ်ကျောင်းသားငယ်လေးတယောက် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗမာ့တပ်မတော်တွင်း ဝင် ရောက်ပြီး အရိုးကျေကျေ အရည်ခန်းခန်း တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမယ့် တပ်တွင်းအာဏာမက်မှု များကြောင့် အထူး သဖြင့် နိုင်ငံတော်အာဏာကိုမက်လာကြတဲ့အခါ ဘာကိုမှမထောက်ထားတော့ဘဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာပြီး ဘယ်လိုဘေး ဖယ်ခံလိုက်ရတယ်…ဆိုတာကို(ပါးပါးလေးတို့ပြီး) အလွန်ရသ မြောက်စွာ ရေးသားဖော်ကျူးထားမှု ဟာ လက်ရှိတပ်မတော်သားများအတွက်ရော၊ ဗမာပြည်ကြီး တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ကြီး ဖြစ်တဲ့ တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသူများ အတွက်ရော အလွန့်ကို သံဝေဂရစရာ၊ လေ့လာစရာ၊ သင်ခန်းစာယူစရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီအထဲကမှ အထက်မှာ ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အချက်ကို သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ အောက်ပါ “အခန်းကလေး”ကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
“….နောက်တနေ့ စစ်ရာထူးခန့်အတွင်းဝန်၏ရုံးခန်း၌ ဒုဦးစီးချုပ်နှင့်တွေ့ရသည်။ သူသည် ဖော်ရွေ ပြုံးရွှင်စွာပင် နှုတ်ဆက်သည်။ ဘိလပ်ရှိရုံးအကြောင်းစသည်တို့ကို ခေတ္တဆွေးနွေးကြသည်။ ထို့နောက်မှ သူ၏အိတ်အတွင်းက ဒိုင်ယာရီကဲ့သို့စာအုပ်ကလေးတအုပ်ကိုထုတ်၍ဖွင့်ကာ စာမျက်နှာတခုကို ကြည့် သည်။ ကျွန်တော်အားပြောရန် အချက်အလက်တို့ကို ရေးမှတ်ထားဟန်တူပါသည်။
“ဗိုလ်မှူးတင်မောင် တာဝန်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ အားလုံး ကျေနပ်ပါ တယ်။ အစစလည်း အင်မတန်အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေပွန်တယ်။ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက် လို့လည်း အင်မတန်သန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ အလုပ်သဘောနဲ့ကတော့ အား လုံးကောင်းပါတယ်။ တခုပဲ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောစရာရှိတယ်။ အဲဒါက ခင်ဗျားဟာ တပ်တွင်းညီညွတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိခိုက်စေတဲ့ စကားနည်းနည်းပါးပါး ပြောခဲ့တယ်။ တိတိကျကျပြောရရင်… ခင်ဗျားဘိလပ် ရောက်ခါစက ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောနဲ့ ပြောတာတွေ မကောင်းဘူး”။
သူသည် ထိုစွဲချက်ကို အကျယ်ချဲ့၍ပြောပြနေပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ တချိန်လုံးပြုံး၍ နားထောင်နေသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်သည် သူစွပ်စွဲသော အခြင်း အရာနှင့်ပတ်သက်၍ အတိတ်သို့ပြန်လည် စဉ်းစားနေခဲ့မိပါသည်။ ဘာတွေများပြောခဲ့မိသလဲ၊ သတိရပါပြီ။ ဟုတ်ပါသည်။ တစိတ်တဒေသတော့ မှန်သည်။ ကျွန်တော်ဘိလပ်ရောက်ခါစရောက်တဲ့ညမှာပဲ ထင်သည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောအခန်းတွင်စုဝေး၍ စကားစမြည် ပြောနေခဲ့ကြသည်။ အခြားအရာရှိနှစ်ဦးသုံးဦးလည်း ပါသည်။
ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းတွေပြောရင်းမှ တပ်တွင်းကိစ္စများသို့ ရောက်သွားသည်။ ထိုသို့ တပ်အတွင်းရေးတွေ ပြောကြရင်း ဝေဖန် ချက်အချို့ပါရှိလာပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ဘာတွေဝေဖန်မိခဲ့သည် ကိုပင်မေ့နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့တတွေ အချင်းချင်းတွေ့လျှင် ဒီလိုပဲ ပြောတတ်ဆိုတတ်၊ ဝေဖန်စရာရှိတာတွေ ဝေဖန်တတ်ကြသည်။ ထူးဆန်းသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ တွေ့တုန်းပြောကြပြီး လူချင်းခွဲလျှင် မေ့ကြစမြဲပင်ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ကျွန်တော့်အဖို့တော့ မေ့ခဲ့ပါပြီ။
သို့ရာတွင် ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းသောအချက်တခုတော့ ပေါ်လွင် ပါသည်။ ထိုစကားဝိုင်းအတွင်းမှ ပုဂွိုလ်တဦးဦးသည် စေတနာဖြင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမည်။ သို့မဟုတ် အခြားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ် ကောင်း ဖြစ်ပါမည်။ ထိုညက ပြောခဲ့ကြသောစကားတို့ကို ဗိုလ်မှူး ချုပ်အောင်ကြီးအား ပြန်လည်ပြောပြ တိုင်တန်းခဲ့သည်။ အဲဒီအတွက်ကိုတော့ ကျွန်တော်စိတ်မကောာင်းဖြစ်မိသည်။ ထိုသို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းမှာ စိုးရိမ် ကြောင့် ကြမှုကြောင့်တော့မဟုတ်ပါ။ ထိုပုဂွိုလ်ညံ့ဖျင်းပြုမူချက်ကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်တွင်း၌ ဖြစ်ရလေဟုသာ မှတ်တမ်းတင်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထိုသူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်တွက်ဆလို့ရသည်။ သို့ရာတွင် ရှိပါစေ တော့။
ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရာဇဝင်၊ ထိုစွပ်စွဲချက်၏ နောက်ကွယ်မှ ဇာတ်လမ်းကိုတော့ ကျွန်တော်သည် ကွက်ကျော် တွေးမိပါသည်။ ထိုအချိန်က တပ်တွင်း၌ ကိုယ့်အုပ်စုကလေးနှင့်ကိုယ်လိုလို ရှိခဲ့ကြသည်။ သူကတော့ ဘယ်သူ့လူ၊ သူကတော့ ဘယ်ဝါ့လူ ဟူ၍ ပြောတတ်ကြသည်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ထိုသို့ပင် ပြောကြမည်ဖြစ်သည်။
ပြောလည်းပြောကြသည်။ ကျွန်တော့်ကို”ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော၏ လူ” ဟုတချို့က ထင်ကြသည်။ ကျွန်တော်သည် စစ်ဆင်ရေးတို့တွင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော၏လက်အောက်တွင် များစွာအမှုထမ်းခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်နှင့် နီးကပ်စွာနေခဲ့ရသည်။ ဒီလိုနေခဲ့ရလို့ သူ၏စွမ်းရည်သတ္တိ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နှင့် စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်တို့ကို ကောင်းစွာ သိမြင်ခဲ့သည်။ သိမြင်ခဲ့သည့်အလျောက်လည်း အလုပ်သဘောအား ဖြင့် ကျွန်တော်သည် လေးစားသည်။ ထို့ ကြောင့် အတူသွားအတူလာဖြင့် ကြာမြင့်ခဲ့ကြသောကြောင့် တဦး နှင့် တဦးခင်မင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဆက်ဆံရေးသည် ဒိထက် မပိုခဲ့ပါ။ ဒါနဲ့တော့ ကျွန်တော် သည် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော၏လူ မဟုတ်ရပါ။
အမှန်မှာကျွန်တော်သည်ဘယ်သူ၏လူမှ မဟုတ်ခဲ့။ တပ်အတွင်းရှိ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟု ကျွန်တော်တို့ အသိ အမှတ်ပြုထားသူတို့သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအပြင် သုံးလေးဦးမျှသာရှိသည်။ ထိုပုဂွိုလ်တို့အားလုံးအား ကျွန်တော်သည် လေးစားသည်။ အချို့မှာမူ ပုဂွိုလ်စွဲအရ ပိုမို၍ ခင်မင်သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော့်တွင် ဆရာမရှိ။ မည်သူ့ကိုမျှလည်း ဆရာမမွေးခဲ့။ ထိုသို့ဆရာမွေးရန်လည်း အကြောင်းမရှိ။ ညာချင်၊ ခိုချင်၊ ကပ်ချင်၊ အခွင့်အရေး ယူလိုချင်သူတို့သာလျှင် ဆရာမွေးကြမည်ဖြစ် သည်။
ဒါတွေကိုတော့ ထားပါတော့။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ဖြေရှင်းရန်မလိုပါ။ ဖြေရှင်းရန်လည်း မရည်ရွယ်ပါ။
ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး၏စကားဆုံးလျှင် ကျွန်တော်က ..“ဒါဖြင့် ကျွန်တော်နည်းနည်း ပြန်ပြောပါရစေ ”
“ပြောပါ” သူ၏မျက်နှာသည်ပြုံးလျက်ပင် “ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်မှူးတင်မောင်ပြောတာတွေကိုတော့ အသိ အမှတ်မပြုဘူးနော်” …တဲ့။
ကျွန်တော်သည်အားပါးတရ ရယ်မောလိုက်မိပါသည်။ ကျွန်တော့်အား စွဲချက်တင်တုန်းကတော့ စစ်ရာထူး ခန့် အတွင်းဝန်ရှေ့တွင် တရားဝင်အဖြစ် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်က ဖြေရှင်းပါရစေဆိုတော့ တရား မဝင်ဘူးတဲ့။ ရှိပါစေတော့၊ ကျွန်တော်အဖို့လည်း အထူးတလည် ပြောစရာမရှိပါ။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့မိသရွေ့တို့ကို ဝန်ခံလိုက်ပါသည်။ တောင်းပန်လိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်မပြောခဲ့ရသော အပိုစကားတို့ကိုမူ ငြင်းဆိုခဲ့ရသည်။
…. (ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတင်မောင်၊ “ဘဝမုန်တိုင်းထန်လေပြီ” စိတ်ကူးချိုချိူ စာပေ။ နှာ-၃၇၈-၃၈၀)
ဒီအခန်းရဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကို ကျွန်မ နည်းနည်း ရှင်းပြပါရစေ။
၁၉၅၂ ခုနှစ်မှာဖဆပလက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ငြိမ်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အနောက်နိုင်ငံ အတော်များများကို စစ်ဖက်လေ့လာရေးအဖွဲ့အဖြစ် သွားရောက်ရာမှာ ဖေဖေကဒုအဖွဲ့မှူးအဖြစ် ပါသွားပါ တယ်။ ဖေဖေတို့ လန်ဒန်ရောက်ချိန်မှာ ဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင်ကလည်း လန်ဒန်ကဗမာသံရုံးမှာ စစ်သံမှူး အဖြစ်ရောက်စပါပဲ။
အိမ်အဆင်သင့် မဌားရသေးတာကြောင့် ဖေဖေတို့အုပ်တည်းနေတဲ့ ဟော်တယ်မှာ ဝင် ခဏ နေရပါတယ်။ အဲဒီ ကာလက အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ဟန်ရှိပါတယ်။ ဖေဖေလည်း ဒီကိစ္စတွေ ဘာမှသိဟန်မတူပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖေဖေတို့ အုပ်ထဲမှာက ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှူးများ ပါပါတယ်။ ဖေဖေကပြောပြဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာ တချို့တော့ ရှိပါတယ်။
ဖေဖေဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် သူတို့အုပ်(ဆိုရှယ်လစ် အုပ်စုကို ဆိုလို)ကလူတယောက်ကို ကပ်ထည့်ထားတာချည်း ပဲတဲ့။ အခုဒီအုပ်ထဲမှာလည်း ဗိုလ်မှူး ကြီးတင်မောင်က နံမည် အတိအကျဖော်မရေးပေမယ့် ဖေဖေကတော့ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုး(နောင် မဆလခေတ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး)ကို သူ့ အကြောင်း သတင်းပေးအဖြစ် သူ့စာအုပ် (ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပွတ္တိ-နှာ-၁၉၉)မှာ ဖော်ထုတ်ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါ တယ်။
၁၉၅၅ ခုနှစ် ဗိုလ်မှူးတင်မောင် ဗမာပြည်ပြန်ရခါနီးမှာ အင်္ဂလန် ဆေးကုဖို့ရောက်လာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက ဗမာပြည် ပြန် ရောက်ရင် ပြည်မှာရှိတဲ့တပ်မဟာကို ကိုင်ရမယ်လို့ပြောလိုက် တာပါ။ တပ်မဟာမှူးအဖြစ် ရာထူးတိုးမယ်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန် စစ်ရာထူးခန့်အတွင်းဝန်(ဗိုလ်စန်းယု)ဆီရောက်တော့ မြစ်ကြီးနားရှိ ကယားတပ်ရင်းကို တပ်ရင်းမှူးအဖြစ် အမြန်သွားဖို့ ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းကိုယ်တိုင်က တပ်မဟာမှူးအဖြစ်ပြည်သွားရ မယ်လို့ပြောထား တာဖြစ်တော့ ဗိုလ်မှူးတင်မောင်က စောဒကတက်တော့တာပေါ့။ ဒီတော့ ဗိုလ်စန်းယုက အပါး။
(ဒါ့ကြောင့်လည်း ဗိုလ်နေဝင်းကိုယ်ခွဲအဖြစ် သမ္မတဖြစ်တာ)။ ဒါဆို ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ တွေ့လိုက်ပါ လားဆိုပြီး ချိန်းပေးပြီး အဲဒီနေ့ကအဖြစ်အပျက်ကို အထက်ပါအတိုင်းဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင်က ပြန်ရေးထား တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာလေးမှာ ဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင်ရဲ့(မထိတထိ)ရေးသားချက်လေးတခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။
“ ….ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ (ယခု ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင်အထိန်းသိမ်းခံနေရသည်။)”…. တဲ့။ (အထက်ပါ စာအုပ်နှာ-၃၇၇)။
သြော်….ကာလ၀ိဘက်နောက်ပိုးတက်တာများ နောင်ဘဝတောင် မကူးလိုက်ရရှာဘူး။
ဒီဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင်စာအုပ်ရဲ့ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးအခန်း(climax) ကတော့ …..
(အထက်ပါစာအုပ် နှာ ၅၀၀-၅၀၇)။
၁၉၆၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး၁၉၆၁ ခုဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်အတွင်း ဗိုလ်နေဝင်းက တပ်မဟာမှူးများ ညီလာခံကိုစစ်ရုံးချုပ်မှာခေါ်ယူကျင်းပပြီး အားလုံးကို(လက်နက်ပါလာရင် အပ်ပါလို့ဆိုပြီးမှ) ပြင်းပြင်းထန် ထန် ကြိမ်းမောင်းဆူပူပါတယ်။ စွပ်စွဲချက်တွေ တခုပြီးတခု တင်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ဘက် မလိုက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပါလျက် တည်မြဲဘက်လိုက်မှုလည်းပါတယ်။ တပ်အတွင်းရေးတွေလည်း ပါတယ် ….. တဲ့။
တကယ်တော့ တရားလိုနဲ့ တရားသူကြီးက တယောက်တည်းဖြစ်နေပြီး စွပ်စွဲခံရသူများကလည်း ဘာမှဖြေ ရှင်းခွင့်မရှိတဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းတယောက်တည်း ကြဲချင်တိုင်း ကြဲနေတဲ့ပွဲ။ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ အာဏာရှင်ပြယုဂ်ကို အလွန့်ကို ရသမြောက်စွာ အသက်ဝင်စွာရေးသားထားတဲ့ အခန်းပါ။
တနည်းပြောရရင်တော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သန္ခွေတည်ခန်းပါ။
“ထွက်ကြ၊ အခုထွက်ကြ၊” ထွက်ရမည့်သူတွေ၏ နာမည်တို့ကိုတဦးစီခေါ်၍ တပ်မတော်မှနုတ်ထွက်ကြ ရန် အမိန့်ပေးလျက်ရှိနေပါပြီ။
“ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကြောင့် ယနေ့မှအစပြု၍ တပ်မတော်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါမည့်အကြောင်း
လေးစားစွာဖြင့်”….. ပြီးတော့ တပ်မှူးကြီးများ လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရပါသည်….. တဲ့။
ဗိုလ်မှူးတင်မောင်ကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့အထင်အမြင်လွှဲမှားမှုကိုခံရတာ။ ပြန်ဖြေရှင်းဖို့အခွင့်အရေးလည်းမရခဲ့တော့။ ရှိ-ပါ-စေ-တော့….. တဲ့။
သူကသာ ကိုယ့်အပြစ်နှင့်ကိုယ်(တကယ်လည်းရွေးကောက်ပွဲမှာ တည်မြဲဘက် ပင်းခဲ့မိတာပါ) ရှိပါစေတော့လို့သဘောထားပြီး အေးအေးဆေးဆေးခြံစိုက်စားတော့မယ်ဆိုပြီး တောင်ကြီးတက် ညှိုးညှိုး ငယ်ငယ် နှိမ်နှိမ်ချချနေနေပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ မျက်မာန်ရှခံရသူအနေနဲ့ ဒုက္ခတွေတမျိုးပြီးတမျိုး မဆုံးနိုင်အောင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ စစ်ခုံရုံးဖွဲ့ပြီး တပ်တွင်းရှိစဉ်က ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာ စစ်ဆေးအပြစ်ပေးခဲ့တာတွေ၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ကြံစည်ခံခဲ့ရတာတွေ နောက်ဆုံး ၁၉၆၂ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတာတွေ စုံနေပါတယ်။ ဒါတောင် ဒီကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပွတ္တိစာအုပ်ကြီးဟာ အဲဒီအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အခန်းမှာဆုံးသွားပေလို့ပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဖေဖေကတော့ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ဒီလိုနိဂုံးချုပ်ထားပါတယ်။
….. တကယ်တော့ ထိုရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူလူထု၏ “အသံမထွက်သော တော်လှန်ရေးတရပ်” သာ ဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူများက စစ်တပ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံရေးအရ ဖယ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“….. သန့်ရှင်းအစိုးရတက်လာပြီးနောက် ဗိုလ်နေဝင်းသည် ထိုလူထု၏ တည်မြဲဆန့်ကျင်ရေးလှိုင်းကို စီးပြီး တပ်မတော်ထဲမှ မိမိ၏ဘက်မလိုက်ရေးညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နာ’ ဟုဆိုကာ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း တည်မြဲဘက်က ပင်း ပေးခဲ့သည့်တပ်မှူးကြီးများကို ထုတ်ပယ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ ဗိုလ်နေဝင်း၏တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူ့အားပြိုင်ဆိုင်နိုင်သည့် စစ်ဘက်ဝါချင်း မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေသည့်တပ်မှူးကြီးများကို သူ့ရာထူးလုံခြုံရေးအတွက် ဖယ်ရှားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်…..
….. ဤနည်းဖြင့် ဗိုလ်နေဝင်းသည် မိမိအားတင်ပေးခဲ့သည့် ပြည်သူလူထု၏ စွန့်ပစ်ခြင်းခံလိုက်ရပြီ ဖြစ် သော ဆရာရင်းတည်မြဲများနှင့် လမ်းခွဲလိုက်ပါတော့သည်။ တပ်တွင်းတွင်လည်း တစုံတရာသြဇာရှိနေ သည့် ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှူးများကိုလည်း ဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဤလုပ်ရပ်သည် သူ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက်တော့ အလွန်ပြောင်မြောက်သည့်လုပ်ရပ်တခု ဖြစ်ပါတော့သည်။
ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာလည်း သူ့အပေါ် နိုင်ငံရေးအရအမြင်ကောင်းမွန်စေပြီးစစ်တပ်တွင်းမှလည်း သူ့အားယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် အလားအလာ ရှိသည့်တပ်မှူးအချို့ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ပါသည်။….. တဲ့။
ဗမာပြည်ကြီး စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခုလိုအချိန်အခါမှာ အဓိကနဲ့အကြီးဆုံးအခက်ဆုံး ဖြစ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီး(စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပုံစံအမျိုးမျိုးတိုက်ဖျက်ရေး) ကို မျက်ခြည်မပြတ်စေရေးအတွက် ဒီဆောင်းပါးကိုရေးပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကို ဖေဖေရဲ့ဗမာပြည်နိုင်ငံရေး နိဂုံးချုပ်ချက်လေးတရပ်နဲ့ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
….. “ကနေ့ တိုင်းပြည်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခအဖုံဖုံဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာ မြစ်ဖျားခံတာပါ။
ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ ပြည်သူလူထုအတွက် ဒုက္ခတွေ သယ်လာရုံမက တပ်မတော်သားတွေအပေါ်မှာ လည်း ဒုက္ခတွေကျရောက်စေပါတယ်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ် လက်တဆုပ်စာ လူတစုလေးသာ ချမ်းသာနေတာပါ။ ဒါတောင် တသက်လုံး စံစားသွားရတာ မဟုတ် ပါဘူး။ ရှေ့ကသွားကြပြီဖြစ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကြီးများရဲ့ ဘဝဇာတ်သိမ်းကိုပဲကြည့်ပါ”…..
၈-၉-၂၀၀၇–ဒီဗွီဘီနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း။(ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော….. သတင်းဌာနများနှင့် အင်တာဗျူး။ (နေရီရီစာပေ)- -နှာ၁၇၉)။
ဗမာပြည်သူအပေါင်း(တပ်မတော်သားများအပါ) စနစ်ဆိုးအမျိုးမျိုးမှလွတ်မြောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးသာယာတဲ့နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆီသို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ပါစေကြောင်း….. ဆန္ဒပြုလျက်။
၁။ ၂၀၁၇-အောက်တိုဘာ (၁၀)ရက်နေ့မှာကျရောက်မဲ့ ဖေဖေကွယ်လွန်ခြင်း(၅)နှစ်မြောက်နေ့-အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ရေးသားပါတယ်။
၂။ အရေးတော်ပုံဂျာနယ်။ အတွဲ(၂)။အမှတ်(၁၀) မှ။
ဂီတအနုပညာရှင်ကြီး မာမာအေး စိန်ရတုမွေးနေ့ အမှတ်တရ မိုးမခစာအုပ်ထုတ် https://t.co/hfeLcQsX4r https://t.co/3whLKVEhf3 about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းက ဘယ်လောက်များအရေးကြီးသလဲ https://t.co/OJNJCl9S2P https://t.co/WnNDgY5aOR about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite
ခုနစ်ရက်တစ်သီတင်းနှင့် ရသအလင်းအလင်းရောင် စာပေ၀ိုင်း မန္တလေးမှာ သြဂုတ်လ ၁၇ https://t.co/m8T1GF3yup https://t.co/HlbNijxkCT about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite
နွယ်နွယ်လွင် (ခေတ္တ ပြင်သစ်) ● ကျမသိသော ဥပဒေ https://t.co/ZNW5djMKRp https://t.co/u95jTgRNGU about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
လှကျော်ဇော ● ရှစ်လေးလုံးနဲ့ ဗကပ https://t.co/bvjxYYB9mD https://t.co/llpVHzoCjs about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite